Vavaka ho an'ny fitarihana masina sy fitarihana amin'ny taona 2021 | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka ho an'ny fitarihana masina sy fitarihana amin'ny taona 2021
Vavaka ho an'ny fitarihana masina sy fitarihana amin'ny taona 2021
Androany isika dia hiatrika vavaka ho an'ny fitarihana sy fitarihana avy amin'Andriamanitra amin'ny 2021. Amin'ny fiainana, zava-dehibe ny fananana lalana. Izay lehilahy tsy manam-pitiavana dia ho lavo amin'izay zavatra manjo azy. Ny olona toy izany dia hanjary hanelingelina ny fiarahamonina. Ary mandra-pahazoan'ny lehilahy tari-dàlana ho an'ny ainy dia tsy hisy na inona na inona handeha. Izy io dia toy ny jamba mandeha manao dia lavitra ihany. Raha minitra vitsy monja ny dia, satria jamba izy dia mety handany taona maro alohan'ny hahatongavany any amin'izay alehany.
Alao an-tsaina fotsiny hoe tsy nanana tari-dalana na tari-dalana ireo zanak'isreal. Tokony nirenireny tany anaty ala izy ireo mandra-pahatongan'ny tafik'i Egypta indray. Amin'ny fiainana dia tsy maintsy mahazo làlana mankany amin'ny fiainantsika isika. Tsy ho eto mandrakizay isika. Fotoana vitsy sisa tavela handaniantsika eto an-tany. Izany dia manazava ny antony ilantsika hanatratra ny tanjontsika haingana. Mety ho lasa tsy mahomby isika. Ary koa, raha mivavaka mba hahazoana fiarovana avy amin'Andriamanitra, ny lehilahy tsy manana tari-dalana na tari-dalana amin'ny ainy dia hiditra amin'ny fandriky ny fahavalo nefa tsy hitany. Ny fanahin 'Andriamanitra dia hitarika sy hitarika antsika amin'ny làlana tokony halehantsika, amin'ny zavatra tokony hatao. Raha tsy avelantsika hanana fidirana tanteraka amin'ny fiainantsika Andriamanitra, dia mety tsy handeha tsara ho antsika ny raharaha.
Mivavaka aho fa rehefa manomboka mampiasa ity torolàlana momba ny vavaka ity isika, ny fitarihana izay ilain'ny fiainantsika hahatratrarana ny tanjony feno, mivavaka aho mba hamotsoran'ny Tompo antsika amintsika anio amin'ny anaran'i Jesosy. Manome didim-pitsarana aho mba enga anie ny masontsika ara-panahy hisokatra mba hitarika antsika anio anio amin'ny anaran'i Jesosy. Ny taona 2021 dia tsy tokony hitovy amin'ny tamin'ny taona 2020. Ny taona vaovao dia vanim-potoana fanaovana zavatra araka ny tokony ho izy. Tsy misy toerana hanaovana fitsarana sy hadisoana intsony. Momba ny fotoana hanombohantsika manao zavatra amin'ny fomba tsara foana hahazoana ny valiny marina. Enga anie ny fanahin'Andriamanitra ho tonga amintsika rehefa manomboka mampiasa ity torolàlana momba ny vavaka ity isika.
Ray Tompo ô, misaotra anao aho noho ny zavatra rehetra nataonao tamiko tamin'ny taona 2020. Misaotra anao noho ny halaviranao nitondranao ahy. Misaotra anao tamin'ny fitarihanao aho. Avelao hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao.
Ray Tompo ô, mivavaka aho ho an'ny taona vaovao 2021. Mivavaka aho mba tsy ny fomba niara-niasa tamiko tamiko tamin'ny taona 2020, mivavaka aho mba hiara-miasa amiko bebe kokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, mivavaka aho mba hahazo ny fitarihanao sy ny fiarovanao amin'ny fiainako. Avelao ho ampy amin'ny taona 2021 amin'ny anaran'i Jesosy izany.
Tompoko, tsy te-hanao zavatra mifototra amin'ny fahalalako an-tany aho. Tiako ianao hitarika ahy. Te-hiasa mifanaraka amin'ny lalanao amin'ny fiainako aho. Tompoko, avelao izy hiasa amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo 32: 8 fa hampianariko anao sy hampianarako anao ny làlana tokony halehanao; Hanoro anao ny masoko aho. Miorina amin'ny fampanantenanao aho. Mivavaka aho mba hampianarinao sy hampianarinao ahy handeha amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, mivavaka aho mba hahafaly anao ny mahita fahafinaretana lehibe amin'ny lalako. Mivavaka aho mba hametraka ny tongotro amin'ny lalanao amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ny bokin'ny Salamo 37: 23-24 dia milaza fa ny lalan'ny olona dia ataon'i Jehovah, raha mankasitraka ny lalany izy; na dia lavo aza izy, tsy mba hianjera, satria manohana ny tànany Iaveh. Tompoko, mivavaka aho mba hametraka ny tongotro amin'ny lalanao amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Tompo ô, fantatro ny fon'ny olona mikasa ny lalany; fa ny Tompo no mampiorina ny tongony. Ray ô, mivavaka aho mba hametraka ny tongotro amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Mivavaka aho mba hahazo ny fitarihanao. Mivavaka aho mba hitarika anao. Mivavaka aho mba hitarihanao ahy amin'ny taona 2021 amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, ianao no Masina any Isreal, Ilay mampianatra anay ny lalan-kaleha. Ray ô, mivavaka aho mba ho amin'ny taona 2021 dia hitari-dalana ahy amin'ny lalana mankany amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ny soratra masina dia nahatonga ahy hahatakatra fa ny hevitra tsara rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Ray ô, mivavaka aho mba homenao ahy ny hevitra hahatonga ahy ho ambony amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny soratra masina milaza fa mpiandry ondriko ny Tompo ka tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy eo amin'ny ahi-maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano milamina, dia novelominy ny fanahiko. Mitondra ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana ho an'ny anarany izy. Tompoko, mivavaka aho mba amin'ny taona 2021 dia tarihinao handry ao amin'ny kijana maitso aho. Homenao fitsaharana eo akaikin'ny rano milamina aho. Mivavaka aho mba hitarihanao ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana, ary tsy misy mahasakana ahy hiala amin'izany lalana izany amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hosoraninao ho reko aminao. Ny bokin'ny 1 Jaona 2:27 2 dia milaza fa ny hosotra izay noraisinareo taminy dia mitoetra ao anatinareo, ka tsy mila hampianarin'olona ianareo; fa tahaka ny nanosoran'ilay hosotra ilay fampianarana ny zavatra rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahamarinana. Tsy lainga izany, ary araka ny nampianarany anareo, dia tomoetra ao aminy ianareo. Manome didy aho fa amin'ny famindram-ponao no handrotsahanao amiko ny fanosorana hitarika ahy amin'ny lalanao, izay hitarika ahy amin'ny làlana tokony harahina, izay hitarika sy hiaro ahy mandritra ny taona 2021. Mivavaka aho mba haidinao amiko ity. ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, mivavaka aho ny amin'ny fanahinao izay hampianatra ahy ny zavatra rehetra, avelao hitranga amiko anio amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ray, toa an'i Mosesy ihany, dia nilaza fa raha tsy hiaraka amiko hatramin'ny 2021 ianao dia tsy mety mandeha. Tompoko, tiako ho eo afovoan'ny taona 2021 ianao.Raha mijery ny ankavanako aho, avelao aho hahita anao, izaho rehefa mijery ny ankaviako, avelao aho hahita anao amin'ny anaran'i Jesosy.
fiarovana masina amin'ny 2021
vavaka hahazoana fitarihana
vavaka ho fiarovana
Previous lahatsoratraVavaka ho fiarovana an'Andriamanitra amin'ny 2021
Next lahatsoratraFanambarana mahery vaika Nandritra ny 2021
Salamo 78 Ny dikan'ny hoe Andininy